Carrot Keke Recipe: Maitiro Ekugadzira? Tarisa uone mabikirwo akanakisa!
Maitiro Ekukurumidza Kuwedzera Metabolism: Chii Chaunodya? Ona matipi anoshamisa ekudzora uremu nekukurumidza!
Rue tii: Ona maitiro ekuigadzira uye izvo zvinongedzo zvinogona kuita kuti iwedzere kunakidza
Zvokudya	 27 December 2018
Carrot Keke Recipe: Dzidza maitiro ekugadzira ichi chinonaka mune yakapusa nhanho nhanho!
Kune avo vanofarira zvihwitsi, iyo kerotsi keke recipe inyanzvi yekudzidza. Chikafu chakapfuura makore, mazera, nguva uye icho nanhasi chinoramba chakasimba, kuti chinonaka uye chiri nyore kwazvo kugadzirira.
Mune inotevera misoro iwe unodzidza nhanho nhanho maitiro ekugadzira inonaka karoti keke recipe. Kuwedzera kune mamwe matipi ekuzora keke rako uye nekuita kuti riwedzere kunakidza. Buda!
Ndeipi yakanakisa karoti keke recipe?
Iyo keke yecarrot inogona kuita nhanho imwe kana mbiri, zvese zvinoenderana nezvaunoda. Imwe ndiyo nhanho yehupfu uye imwe yacho, yakasarudzika, ndeyekuti kana iwe haudi kuwedzera icho chinonaka chokoreti icing.
Mukufamba uku, iwe unodzidza maitiro ekugadzira chete mukanyiwa uye, mukati merimwe rugwaro, kufukidza kuchadzidziswa futi.
. 2 madiki makarotsi
. 1 uye ½ mukombe weshuga tii
. 3 mazai
. ½ mukombe wemafuta tii
. ½ mukombe we cornstarch tii
1 uye ½ mukombe weupfu hwegorosi
. 2 mashupuni ehupfu hwekubheka
Kutanga iwe unofanirwa kukwenya makarotsi. Mushure mezvo, zviise mublender pamwe nemafuta uye nemazaiwo. Kurova kusvikira yaita bhuru rakafanana. Isa uyu musanganiswa muhombodo hombe kana muhari uye sanganisa mushuga, chibage uye hupfu-hwechinangwa. Mushure mekunge zvese zvagadziriswa, isa mbiriso uye pedza kusanganisa.
Preheat oven uye wozoisa bundu iri pabheka uye bika kwemaminitsi makumi mana muovheni yepakati. Zvinogona kutora zvishoma kana zvishoma, zvichienderana nesimba uye mhando yeovheni yako.
Ready. Wobva wangobvisa icho kubva pani, chiise mune imwe mudziyo wesarudzo yako, mirira kuti itonhorere kana idye inodziya, kana uchida.
Nzira yekuita sei iri nyore recipe?
Nhanho nhanho inotsanangurwa pamusoro apa ndiyo yakapusa iwe yaunowana kuti uite inonaka kwazvo, inotapira uye inonakidza keke karoti. Ingo tevera iwo matipi akatsanangurwa pamusoro uye zvese zvichave zvakanaka. Zviri nyore kwazvo, pasina zvakavanzika. Zano chete nderekucherechedza huni kuitira kuti isazonyanya kana kuwana mbishi.
Kuti uenderere mberi nekuvandudza karoti keke recipe, yakanakisa tip ndeyekugadzira iyo inonaka chokoreti icing.
Ndeipi nzira yekubheka yekatokoreti-yakavharwa karoti keke?
Iyo icing inofanirwa kuitwa apo keke riri kubheka, kuti usatambise nguva uye zvese zvakagadzirira, zvakanyanya kana zvishoma, panguva imwecheteyo. Ona zvinoshandiswa uye kugadzirira pazasi!
. 4 tablespoons emukaka
. 2 mashupuni echokoti yeupfu
. 2 mashupuni ebhotela
. 2 tablespoons yeshuga
Sanganisa mukaka, shuga, batare uye chokoreti mumudziyo wemukaka. Isa kupisa pazasi uye unomhanyisa uyu musanganiswa wakadzikama kusvikira wanyatsotsetseka uye wawedzera. Bvisa moto, gadzira maburi mashoma mukeke uye udururire muto kubva pakukora. Ready! Keke rako rakagadzirirwa zvakakwana kuti ripedzwe.
Kugadzirira sei nyore?
Iyi yekubheka yakapusa uye yakapusa inogadzira ingangoita makumi maviri servings yekeke uye inogona kuwedzeredzwa nekusaswa kana kunyangwe grated kokonati, kana uchida. Super yakapusa kugadzirwa, uine mashoma zvigadzirwa, zvakachipa uye zvinogona kutotengeswa kana iwe uchida imwe mari.
Ndeupi musiyano weiyo American karoti keke recipe?
Musiyano uripo pakati pekeke reAmerica nereBrazilian nderekuti icing inogadzirwa nemahunuts, sinamoni uye vanilla. Izvo zvinopa chimiro uye kuravira zvakasiyana zvakanyanya kubva kuchinyakare chokoreti icing.
Kuti ugadzire ichi, unofanirwa kusanganisa bhotoro, kirimu chizi, shuga uye vanilla nekapu kana musanganisi wemagetsi. Wobva wangokanda pacake wobva wawedzera nzungu.
Sinamoni inoshandiswa mukugadzirira kwehupfu pamwe chete neupfu uye zvishoma zvishoma zvevanilla. Iyo nzira yekugadzira yakafanana, sanganisa zvese wozobika.
Ungazviita sei kuti ive nemhepo?
Iyo ine karoti keke karoti, iyo ine maburi mashoma uye inotaridzika yakawanda oxygenated, ndeyekuti inotora hafu yekapu yemukaka tii kana uchinge uchinge uchisanganisa izvo zvinoshandiswa kugadzira iyo mukanyiwa. Ingo wedzera mukaka uye uchaita sezvizvi.
Ndeipi nzira yekubheka keke karoti mune hombe yekubheka dhishi?
Iyo yekubheka iyo yakadzidziswa mune ino chinyorwa inobereka makumi maviri maseringi, ndokuti, inofanira kugadzirwa mune hombe yekubheka dhishi. Kana iwe uchida kugadzira yakakura hombe, ingo wedzera zvakaenzana huwandu hwechinhu chimwe nechimwe chinhu.
Gara, pachave nekeke
Kana iwe uchida kudzidza iwo akanaka mabikirwo uye uchiri kuwana mari yekuwedzera nawo, iwe unofanirwa kuziva Fica, pachave nekeke. Iyo yakanakisa e-bhuku rakagadzirwa nerakawanda rudo uye rudo naambuya vanodiwa kwazvo muBrazil, Palmirinha.
Mune e-bhuku uchave unokwanisa kuwana gumi akasarudzika mapikicha akasarudzwa naPalmirinha. Mune yekubheka yega yega, pane nhanho nhanho yechimwe chidiki chakavanzika chinoshandiswa uye neicho, iwe unozokwanisa kugadzira makeke akanakisa uye uwane purofiti yakanaka.
Ehe! Iyo Fica, ichave nekeke yakanyatso kukwana uye izere nemaoko-akasarudzika mapepa. Kuwedzera pakudzidza yekubika-yekudiridza mabikirwo, iwe unogona kubatsirwa nazvo uye uve hotshot. Nemapepeti aPalmirinha aunofarira, iwe unodzidza kugadzirira makeke aya nenzira iri nyore uye inoshanda.
Dzvanya pane bhatani pazasi uye utenge yako Fica izvozvi, pachave nekeke!
Kana iwe waifarira iyi karoti keke yekubheka chinyorwa, chigovana neshamwari dzako uye nemhuri!
Maitiro ekubvisa erima madenderedzwa: Ona yakanakisa imba uye aesthetic nzira
Osteopathy: Tsvaga chii, sarudzo uye zvimwe pano!
Kudya kwemvura: Tsvaga kuti chii, zvinoshanda sei, mhando uye nezvimwe!